दारुमा गुडिया : आफ्नो गुड लक् चार्म आफै बनाउनुहोस | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > दारुमा गुडिया : आफ्नो गुड लक् चार्म आफै बनाउनुहोस
जापानमा यात्रा को दौरान, धेरै आगन्तुक सम्भवतः दारुमा गुडिया देख्नु भएको होला। सामान्यतया यी गुडिया गोलाकार आकारको सानो र रातो, हुन्छन जसको आश्चर्यचकित बृहत्तर आँखा हुन्छ। यहाँ दारुमाका धेरै विभिधता छ किनकि विभिन्न क्षेत्रहरूले उनीहरूको आफ्नै अनुपम रूप र बाहुलीमा दारुमालाई बनाएका छन्। निस्सन्देह कलात्मक व्याख्या र व्यवसायिकरणले पनि हामी मध्ये धेरैले आज दारुमा देख्ने तरिकामा प्रमुख भूमिका खेलेको छ। जापानी संस्कृति को धेरै पक्षहरु को जस्तै, त्यहाँ एक रमाइलो देखिने मूर्ति पछाडि एक समृद्ध इतिहास र परम्परा छ।
दारुमा वास्तवमा भिक्षु बोधिधर्मको स्वरुप हो, जसलाई जेन बौद्ध धर्मको संस्थापक मानिन्छ। यो धर्म जापानी जीवनको अभिन्न अंग भएको कारण, उहाँ स्वाभाविक रूपमा देशभरि भाग्य र समृद्धिको प्रतीक बन्नुभयो। पप स्टार जस्तै जुन जनताले चित्रण गर्छ, उसले अन्ततः आफ्नै कार्य मूर्तिहरू पाए। ठाउ अनुसार दारुमामा केहि भिन्नता भएता पनि, त्यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण समानताहरू छन्:
तल सधैं अंडाकार आकार र भारी वजन। जब झुकाव हुन्छ वा कसैले धकेल्दछ यो गुडिया जहिले पनि ठाडो स्थितिमा फिर्ता हुन्छ। प्रतीकात्मक रूपमा यसको अर्थ सफलता र असफलताबाट पुन: प्राप्ति गर्ने क्षमता आएको छ।ती ठूला सेता आँखाहरू तपाईंले प्राप्त गर्न चाहानु भएको लक्ष्यको दर्शन जनाउछन। एक पटक लक्ष्य पूरा भएपछि उसलाई पूर्ण नजर दिनको लागि अर्को रनगाईने चलन छ।
व्यक्तिहरू नयाँ वर्षको लागि वा ठूलो आउँदो चाड पर्वको लागि दारुमा गुडियाहरू राम्रो भाग्य आकर्षणको रूपमा किन्नु सामान्य हो। तर के तपाईंलाई थाहा छ यो गुडिया तपाई पनि आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्छ? मिहारा हीरोशिमा प्रान्तको सानो शहर हो जहाँ उनीहरूसँग विशेषज्ञ डरुमा कार्यशाला छ। यदि तपाईं ३ सेसनमा भाग लिन समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भने, तपाईं आफैले आफ्नो दारुमा आफूलाई मनपराउने तरिका बनाउन सक्नुहुन्छ – मेरो एक ठूलो मुस्कान र मजेदार टोपी लागेको छ! मिहारा स्टेशनको स्थानीय पर्यटन कार्यालयले तपाइँलाई सहि दिशामा औंल्याउँछ, र यो त्यहाँबाट केहि मिनेट पैदल टाढा छ। तपाइँ उनीहरूको वेबसाइटमा अधिक जानकारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ:
केवल ¥ 500 को लागी, तपाईका लक्ष्यहरुको प्राप्तिलाई द्रुत ट्र्याक गर्नको लागि यो एक निश्चित सम्झौता हो!